ny Liam Mallari 17/05/2019
Train Travel Frantsa, Train Travel Alemaina, Train Travel The Netherlands, fiaran-dalamby Travel torohevitra, Travel Europe 0
(Last Nohavaozina: 25/10/2019)
Europapark no lehibe indrindra sy malaza indrindra zaridaina nanerana an'i Eoropa, taorian'ny Disneyland. Na izany aza, izany no tsy nahoana isika no nifidy azy io. Izany no iray amin'ireo tsara indrindra tany Eoropa voly zaridaina eo amin'ny hevitra noho ny-roller-coasters. Hahazo ny mitaingin-dia maro amin'izy ireo, ary betsaka ireo tena manam-paharoa. Ianao maintsy hanamarina Arthur – ny vaovao--roller coaster izany ny fitambaran'ny iray Indoor / ivelany ny iray amin'ny maizina mitaingina ihany koa!
Afaka mahita ity lohahevitra mahagaga zaridaina in harafesina, tanàna akaiky Freiburg sy Strasbourg. Izany dia midika fa afaka mahatratra Europapark somary mora foana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby, avy amin'ny tanàna. The fiantsonan'ny fiaran-dalamby dia misy 4km lavitra mba hahafahanao mandeha avy eo amin'ny fidirana, na haka iray amin'ireo tapaka fiara fitateram-bahoaka izay mankany amin'ny valan-javaboary.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-amusement-parks-europe/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
fiaran-dalamby tanora, Train Travel Frantsa 0
Train Travel Frantsa, Train Travel Alemaina, Train Travel Italia, Train Travel Norvezy, Train Travel Soisa, Travel Europe 0